Jawaabta Taxanaha Iimaanka iyo Sayniska - Rabbi Michael Avraham
Jawaabta Taxanaha Iimaanka iyo Sayniska
Jawaabta > Qaybta: Iimaanka > Jawaabta Taxanaha Iimaanka iyo Sayniska
P. Waxaa la weydiiyay 4 sano ka hor
Shalom Harav ee macnaha guud ee taxanaha sayniska iyo caqiidada uu rabbi ku qorayynet Rabigii ayaa isticmaalay In aragtida physico-fiqiga
Su'aashaydu waxay tahay: inta aan ogahay shaki ayaa ku jira caddayntaas, sababtoo ah ka hadalka sababta koowaad waa hadal ku saabsan xaalad ka horraysa waaqiciga oo aan xaaladdani ahayn mid ka go'an sharcinimada dhabta ah ee dhabta ah. faham in aanay caddayn ahayn
Waxaan jeclaan lahaa jawaab mahadsanid.
Michi Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 4 sano ka hor
Haddii aan su'aashaada si sax ah u fahmay, waxaad dhab ahaantii iswaydiinaysaa maxay tahay sababta aad u malaynayso in mabda'a sababaha dhabta ah ee xaqiiqadeena dhabta ahi ay run tahay xataa intaan dunida la abuurin (waayo, awoodeeda waxaan ku caddaynay inay abuurmeen qaar ka mid ah. sabab). Jawaabtaydu waxay tahay in mabda'a sababtu aanu noqon waqti go'an, laakiin laga yaabo inuu noqdo noocyada walxaha. Walxaha innaga naqaan adduunyadu ma aha sababta laftoodu, laakiin waxa abuuray shay/qof, markaa mabda'a sababaha iyaga ku saabsan. Walxaha kale waxa laga yaabaa inaanay u baahnayn sabab. Walxaha ku jira adduunkeena waxaa lagu abuuray abuurista, iyagana mabda'a sababaha keena waxay khuseeyaan wakhti kasta. Marka laga soo tago, xitaa adduunkeena mabda'a sababuhu maaha natiijada indho-indheyn fudud ee waa malo mudnaan leh. Markaa ma jirto wax caqabad ah in lagu dabaqo xaaladaha kale / waqtiyada sidoo kale.
P. Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Qaybta labaad ee jawaabta waxaan ka fahmay inay tahay mudnaanta (ie waxay ku xiran tahay miyir-qabka) waana xaqiiqo ka hor miyir-qabka aadanaha ..
Yacni, wax kasta oo ku xidhan wacyiga aadamaha waxa lagu daraa sababaynta, laakiin wax kasta oo hore u jiray kuma jiraan sababaha.
Sida laga soo xigtay ma fahmin caddaynta.
Michi Shaqaale	Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Way igu adag tahay inaan ka hadlo inta u dhaxaysa. Si sax ah iima aadan fahmin. Anigu kuma doodayo in mabda'a sababaynta uu yahay mid shakhsi ahaaneed. Murankaygu waa inuu ujeedo leeyahay, laakiin waxay khusaysaa waxyaabo khibradeena ah ee maaha waxyaabo kale. Laakiin sida waxyaalaha ku jira waayo-aragnimadeena waa run in lagu dabaqo xitaa ka hor inta aan ninku jirin iyo ka hor intaan dunida la abuurin (ama halkii: oo ku saabsan xilliga abuurka laftiisa). Waxa aan sheegay in mabda'a sababtu aanu ka soo bixin indho-indhayn balse ay ka imanayso sabab mudnaan leh, laakiin kama hor imanayso in ay khusayso walxaha maaddiga ah (kuwa khibradeena) ee maaha shay kasta.
Saaxiibadeed Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Marka loo eego rabbaaniga aasaaskiisu wuxuu ka yimid indho-indhayn dibadda ah oo ku saabsan fikradda sababaha ama wax la mid ah.
Haddaba yaa abuuray? 🙂
Kan wax walba abuuray
Shonra ee socotada ah Waxay ku jawaabtay 4 sano ka hor
Haddii dunida sidaas loo abuuray sabab la'aan, maxay cilladahaas oo kale u dhici waayeen xataa maanta?
Haah, waxaan ku dul socday kiiboodhka mar kale waxaana helay jawaab.
Salaan, Shunra Katolovsky
Su'aal ku saabsan qiimaha aadanaha marka laga eego dhinaca cawaanta
Wax ku barta yeshiva ultra-Orthodox
Ma dhab baa innaga oo xaaladdan oo kale ah?
Hagaaji Daaran Lehavah ma urur cunsuri ah baa? (Tixda 484)
Kala duwanaanshiyaha dhaqanka iyo maskaxda ayaa waliba ku xadgudbi kara (aabbayaasha gabdhaha) Daaran Lehavah ma urur cunsuri ah baa? (Tixda 484)
Oo hadda wuxuu noqonayaa JG Daaran Jawaabta doorashada